Ubuyile uzime wase-Elandskop | News24
Ubuyile uzime wase-Elandskop
USyabonga Mpungose ozobe enandisa kulo mncintiswano.ISITHOMBE : facebook
USUPHINDE washaya ibuya uzime owaziwa ngo-Miss Elandskop nozoba mhla ka-2 kuJuni e-Absolute Place ka-Siyo khona e-Elandskop kusuka ngehora leshumi ekuseni (11 am) kuze kube isebusuku.
Imali yokungenela lo mcintiswano u-R100 umuntu ngamunye kanti kunemali efinyelela ku-R5 000 ezowinwa ilabo abazobe beyingxenye yomncintiswano.
Lo zime ohlelwe Intabayabantu Modelling Agency kuhloswe ngawo ukukhuthaza ukuziphatha kahle kwamantombazana asakhula.
UMnu Mbuso Nyandu nokumsunguli weNtabayabantu aphinde abe umhleli walo mncintiswano uthe akusikona okokuqala enza umncintiswano ofana nalona.
Uthe: “Lo zime sifuna ukufundisa ngawo ozime abasakhula ukuthi kumele baziphathe kanjani kule ndima yezokumodela.
Siyazi ukuthi baningi abantwana abanethalente lokumodela lapha eMgungundlovu kungukuthi nje abazi ukuthi kumele benze njani ukwenza amaphupho abo afezeke.
Ngalabo zime esiloku sibenza sifuna amantombazane lawa asakhula afunde izindlela ezingi zokukhula kubona baphinde bakwazi nokuqinisa ukuzethemba kwabo ukuze uma sebephumela ngaphandle babe sebekulungele ukubhekana nezimbangi zabo.
Ngiyakholelwa ekutheni ukumodela kuyasiza ekuvimbeni izinkinga eziningi ezibhekene nentsha ezifana nokukhulelwa besebancane kanye nokuzinikela ezidakamizweni.
Uma umuntu esengene endimeni yezokumodela uyazi ukuthi kumele aziphathe kanjani kanti futhi kuyasiza ngoba isikhathi sabo esiningi basichitha bezilungiselela okanye bezicijela lemincintiswano,” kubeka yena.
Uqhube wathi zonke izintokazi ezizongenela lo mncintiswano zizobe sezidlulela komunye obizwa ngokuthi NGO Miss KZN.
Ukungena kulo mcimbi u-R30 kanti i-VIP yona ingu-R50. Kulo mcimbi kuzobe kukhona nosaziwayo abazonandisa okubalwa kubona imbongi eyaziwayo uSyabonga Mpungose. Ngeminye imininingwane ungaxhumana noMnu Nyandu enombolweni ethi: 079 616 0059/078 188 7366